Kulan looga doodayay arrimaha federaalka Soomaaliya oo lagu qabtay Minnesota ee dalka Mareykanka - Latest News Updates
Kulan cilmiyeedkaan oo ay soo qabanqaabisay Madasha Dood Qaran ee saldhiggeedu yahay magaaladda Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxaa lagu casuumay shaqsiyaad isugu jira siyaasiin caan ah iyo aqoonyahano Soomaaliyeed oo ka kala yimid meelo kala duwan, kuwaasi kala Yussur Abrar oo ah gabar dhinaca dhaqaalaha ku taqsuustay, islamarkaana mar ahayd gudoomiyihii bangiga dhexe ee Soomaaliya.
Kulankan ayaa waxaa si weyn looga dooday fahamka ay dadka Soomaalidu ka haystaan nidaamka federalism-ka oo ah mid ku cusub hab maamulka dowladnimada Soomaaliya, iyo waxyaabaha laga dhaxalay sanadihii koobnaa ee nidaamkaan dalka ka shaqeynayey. Dooddayaasha ayaa si weyn ugu kala aragti duwanaa federalka, kuwaasi oo dhinacyo kala duwan ka eegayey sida dhaqaalaha, dhaqanka iyo sharuucda dalka u taal siddii loogu dabaqi lahaa.
Cabdulqaadir Cabdi Xaashi oo ahaa wasiirka waxbarashada oo ugu horreyn goobta ka hadlay ayaa si ugu dheeraaday qaab uu ku soo bilowday nidaamka federalismka iyo siddii uu ku soo galay dowladnimada Soomaaliya, isagoo sheegay aas-aaska federalka ay saldhig u ahayd kala fogaanshiyaha iyo aamindarada Soomaalida soo kala dhexgashay tan iyo markii ay burburday dowladdii dhexe ee dalka ka talinaysay, islamarkaana Soomaalidu ay galeen colaado sokeeyo oo dhumiyey kalsoonidii dadka Soomaaliyeed.
Prof. Warfaa ayaa dhankiisa sheegay in federalku uu noqonkaro mid dadka Soomaalida si weyn isugu soo dhaweynkara, haddii si wanaagsan loo baahiyo, islamarkaana lala yimaado faham ku saabsan sida la isugu maamulo. Warfaa oo u muuqday in uu si weyn ula dhacsan yahay nidaamka federalka ayaa ku dheeraday waxyaabaha wanaagsan ee laga dhaxlikaro, isagoo sheegay in uu dalka Soomaalida u horseedikaro barwaaqo haddii ay fahmaan qaabka la isugu maamulo. “Anigu waxaan aaminsanahay in uu Soomaalida u keenikaro barwaaqo iyo isku soo dhawaanshiyo, waxaana tusaale idin kugu filan dalka Mareykanka ee aan joogno,” ayuu yiri Warfaa.
Sidoo kale, Yussura Abrar ayaa dooda dhinaceeda diiradda ku saartay dhaqaalaha Soomaalida iyo nidaamka federalka, iyadoo sheegtay in aysan Soomaalidu haysan dhaqaale ku filan oo ay nidaamkaan ku baahinkaraan. “Soomaalida dhaqaalaheedu waa mid iska kooban, mana lahan isku dheelitir…Tusaale ahaan, maamulladu goobaha dhaqaalaha ee ay maamullaan sida dekedaha wax dhaqaale ah dib uguma soo celiyaan dowladda dhexe, waxaa intaas u sii dheer musuq-maasuqa.”
Ugu dambeyn, doodda waxaa ka hadlay Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame, kaasi oo sheegay mar hore loo baahan yahay dib u heshisiin Soomaalida dhexmarta, gaar ahaan qabaa’ilaadka, kuwaasi oo kala tabanaya dhibaatooyinkii ay horseedeen dagaalladdii sokeeye ee dalka ka dhacay.
Short URL: http://somaliweyn.org/?p=2809